Global Voices teny Malagasy » Hankatò Ny Fampitam-Baovaon’Olo-Tsotra Ny Loka Robert F. Kennedy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Mey 2012 10:19 GMT 1	 · Mpanoratra Bernardo Parrella Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Eoropa Andrefana, Italia, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Zon'olombelona
Miantso ny hisian'ny fifantenana ny Lokan'ny Fanaovan-gazety momba ny Saripika Iraisampirenena sy ny Valan-tserasera Iraisampirenena  ny iray amin'ny fikambanana iraisampirenena miaro ny zon'olombelona lasa aloha indrindra, ny Robert F. Kennedy Center , izay ampiantranoan'ny Sampana [Birao] Eoropeana  ao Florence, Italia. Hankatò ny zava-bitan'ny matihanina sy ny mpianatra manadihady ny resaka zon'olombelona sy ny fisoloana vava hiarovana ny fiovana ny loka.
Ny loka ho amin'ny fanaovan-gazety no dingana voalohany amin'ny tetikasa lavitra ezaka Smart Dissident Project ataon'ny ivotoerana RFK, mikendry ny hanome toerana azo tsapain-tanana ho an'ny mpikatroka an-tserasera avy amin'ny firenena any Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra (fonja marolafin'i Le Murate taloha ao Florence, efa nohavaozina mahafinaritra izy izao) sy fanararaotra ijoroana ho amin'ny fahalalaham-pitenenana sy hiarovana ny zon'olombelona. Afa-mipetrapetraka mandritra ny tapa-bolana ao amin'ny Trano marolafin'i Le Murate ny mpandresy amin'ny sokajy matihanina.
Nahazo ny sarivongana Robert F. Kennedy, mpikatroka miaro ny zon olombelona sady mpanao politika amerikana maty nisy nitifitra tamin ny 1968, dimy taona monja taorian ny fahafatesan ny rahalahiny ny filoha John F. Kennedy
Ao anatin'io tetikasa io ihany koa ny hanomezan'ny Ivotoerana fampianarana momba ny “Social Media and Human Rights: Can Smart Dissidents Create Change? ” [Media sosialy sy zon'olombelona : afa-mampisy fiovana ve ny Mpisintaka Kinga?] izay kasaina hotontosaina ny 18-19 Jona 2012 (miaraka amin'ny fandraisana anjaran'ny Global Voices), arahin'ny lanonana fanolorana ny loka momba ny fanaovan-gazety.
Tsy maintsy mamelabelabelatra ny antony, ny halaliny ary ny fanafan'ny tsy rariny amin'ny fampidirana izay hofantenana ka ahitana ny famakafakana miavaka momba ny politikam-panjakana, ny fandaharana, ny fihetsika isan-karazany ary ny orinasa tsy miankina.
Ny fotoana farany fisorantana anarana dia ny 15 Mey 2012 (tsindrio eto raha haka ny fomba fisoratana anarana ).
Fanampim-baovao avy amin'ny Birao Eoropeana ao amin'ny Twitter an'ny RFK :
Misokatra ny famahanam-bolongana momba ny fifaninanana fanaovan-gazety RFKennedy 2012 amin'ny sosialy media sy ny zon'olombelona http://bit.ly/AwardEntryForm  – http://bit.ly/JournalismAward 
Manolotra loka isan-taona momba ny zon'olombelona sy ny fanaovan-gazety ny ivontoerana Robert F. Kennedy. Tamin'ny Septambra 2011, ny mpandresy tamin'ny loka zon'olombelona dia i Frank Mugisha , tale mpanatanteraky ny Sexual Minorities Uganda , fikambanana misahana ny fiarovana ny olona LGBTI  ao amin'ny firenena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/05/15/33189/
 Lokan'ny Fanaovan-gazety momba ny Saripika Iraisampirenena sy ny Valan-tserasera Iraisampirenena: http://rfkcenter.org/european-journalism-award
 Sampana [Birao] Eoropeana: http://rfkennedyeurope.org/
 tsindrio eto raha haka ny fomba fisoratana anarana: http://t.co/WdEAVoPU
 Sexual Minorities Uganda: http://www.sexualminoritiesuganda.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47%3Aabout-us&catid=25%3Asmug&Itemid=53
 olona LGBTI: http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT